အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီးတွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွ? - Yangon Media Group
အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီးတွင် ကျင်းပမည့် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွ?
မန္တလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅
မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရ မြို့နယ်၊ ဆင်ရွာမြင်းမှူးကျေးရွာ၊ စစ်ကိုင်း-မြစ်ငယ်ဖြတ်လမ်းဘေးတွင် တည်ထားကိုးကွယ်သည့် ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီ တော်မြတ်ကြီး၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်ညနေပိုင်းတွင် ကျင်းပမည့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲနှင့် ထမနဲဆွမ်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲသို့ အသင်းပေါင်း ၂ဝ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ် ကြောင်း စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့မှ သိရသည်။
”ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲမှာ အဓိကပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် အသင်း တွေကတော့ စေတီတော်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဂေါစရဂါမ်ကျေးရွာတွေကဖြစ်ပြီး ဈေးတန်းကိုယ်စားပြုအသင်းတစ်သင်းလည်း ပါဝင်ပါမယ်။ ဆုကြေးတွေကတော့ ပထမဆုရတဲ့အသင်းကို ငွေကျပ် ငါးသိန်း၊ ဒုတိယဆုရတဲ့အသင်းကို ငွေကျပ်သုံးသိန်း၊ တတိယဆုရတဲ့အသင်းကို ငွေကျပ်နှစ်သိန်းအပြင် ကျန်တဲ့ဝင်ပြိုင်တဲ့အသင်းအားလုံးကို နှစ်သိမ့်ဆုအဖြစ် ငွေကျပ်သုံးသောင်းစီကို ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပဲ ချက်ချင်းချီးမြှင့်သွားမှာပါ။ နောက်တစ်ရက် တပို့တွဲလပြည့် နေ့ နံနက် ၅ နာရီအချိန်မှာတော့ စေတီတော်ကြီးကို ထမနဲကပ်လှူပူဇော်ပွဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး ဘုရား ဖူးလာတဲ့ပြည်သူတွေကို နံနက် ၇ နာရီကနေစတင်ပြီးတော့ အလှူ ရှင်အသီးသီးကနေ ထမနဲအပါအဝင် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ တွေနဲ့စတုဒိသာကျွေးမွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကျောက်စိမ်း စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓ ပူဇနိယဘုရားပွဲတော်ကိုလည်း တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံးခတ်ပြိုင်ပွဲနှင့် ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲတို့ကိုထည့်သွင်းကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပါထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကို စေတီတော်ပရိဝုဏ်မြောက်ဘက်ရှိ ကွင်းအတွင်း၌ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပြီး စေတီတော်သို့ဘုရားဖူး ခရီးသွားများဝင်ရောက်မှုများပြားလာမှုကြောင့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကို ထပ်မံတိုးချဲ့ခန့်ထားသကဲ့သို့ Drone CCTV ငါးလုံး၊ အထိုင် CCTV အလုံး ၅ဝ တို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခန်းမှ အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့် ပေးလျက်ရှိကြောင်း စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့မှ သိရသည်။
ခွေးသားပေါက်များကို ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းပေးထားရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ် အိမ်နှစ်လုံး၊ ကားဂိုဒေါင်တ?
ကလေးမြို့ ပင်လုံရပ်ကွက်ရှိ ကုန်မျိုးစုံဆိုင်များသို့ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးရာမှ စားသုံးရန် မသင
ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများတွင် သဘာဝနယ်မြေများ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းမည်
ထိုင်းတောင်ပိုင်း သောင်းကျန်းသူများကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားသွားမလဲ
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ လင်းဝေးရွာတွင် သဘာဝလိုဏ်ဂူ အသစ်တစ်ခုတွေ့ရှိ
၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ကျရှုံးပြီးနောက် ဘူဖွန်အပါအ၀င် ကစားမသားအချို့ နိုင်ငံတကာ ကစားသမား??